Dowladda Federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay naqshada lacagta cusub ee la sameyn doono - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeBusinessDowladda Federaalka Soomaaliya oo soo bandhigtay naqshada lacagta cusub ee la sameyn doono
June 11, 2018 Abdi Omar Bile Business 0
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dhawaan soo bandhigtay naqshada lacagta cusub ee la sameyn doono.
Wasiirka Maaliyada Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo shir saxaafadeed ku qabtay Sabtidii Muqdisho ayaa soo badhigay tusaale kamid ah qaabka ay noqon doonto lacagta cusub oo ka kooban 5,000 (shan boqol oo Shillin) iyo 1,000 (kun Shillin).
Lacagta cusub ayaa bedeli doonta mida duugta ah taasoo la isticmaalayay 20-sanno ee u dambeysay.
Wasiirka Maaliyada ma uusan qeexin wakhtiga dhabta ah ee la daabacayo lacagta cusub.
February 27, 2019 IMF oo sheegaysa in koboca dhaqaalaha Soomaaliya uu kor ugu kacayo 3.5% sanadka 2019
Garoowe-(Puntland Mirror) Tirada Dhimashada dab ka qarxay Garoowe ayaa gaartay saddex qof, sida ay sheegeen ilo-wareedyo caafimaad. Saraakiisha caafimaadka ee ku suagan isbitaalka guud ee Garoowe ayaa warsidaha Puntland Mirror u sheegay in saddex qof [...]